Ndikhumbule? Iicookies zeWebhusayithi
NgoLwesine, Septemba 16, 2010 NgoLwesibini, Aprili 1, 2014 UNick Carter
Ndiyoyika ngamagama. Ndinqwenela ukuba ndingayifaka ikuki yakho kwingqondo yam ngalo lonke ixesha ndikubona esidlangalaleni ikhumbula. Ndicinga ukuba yenye yeendlela iikhompyuter "ezikrelekrele" kunabantu. Kodwa, ngenxa yoku buthathaka kwam, ndiyachukumiseka xa abanye benokundikhumbula ngokulula emva kokudibana nje ithuba elinye. Sisakhono. Ngaba uyazi ukuba yintoni ayindichukumisi: xa abantu bexoka. Oku kuqheleke kakhulu ecaweni yam, apho wonke umntu enxibe iithegi zamagama. Ewe, ndinabantu abangama-700 abezayo, kuninzi nje ukujonga esifubeni sam ngaphambi kokuba ndiphinde ndibabone kwaye uthi, "Molo, Nick!" ngoncumo olupeyintiweyo. Andinamdla.
Ngoku, ngokusikelwa umda kwengqondo yomntu ekhankanywe apha ngasentla, kuyacaca ukuba abazalwana bam abalikhumbuli igama lam. Ke yintoni engenakuthetheleleka? Xa ikhompyuter ingenako. Itekhnoloji kulula kakhulu ukuba uyiqeshe ukukhumbula abantu kwiiwebhusayithi ukusilela kuyo. Nangona kunjalo, abaninzi basenayo. Kwaye, okona kubi, ngaba kunjalo Kaninzi Kuyakhathaza xa iwebhusayithi ingandikhumbuli kunaleyo umntu engenako ukuyenza.
Okokuqala, thatha wonke umntu owuthandayo (okanye, ubuncinci bokubamba iintengiso) GoDaddy.
Ndingumthengi weGoDaddy. Ndineminyaka. Kwaye, kuhle ukuba bakhumbule igama lam xa ndindwendwela. Njalo xa ndiqala iseshoni entsha kwiGoDaddy.com, ndibuliswa ngo "Wamkelekile, uNicholas." Bade bandixelele ukuba ndinemimandla embalwa ephelelwa lixesha, kwaye banikezela ngeentengiso ezithile (endicinga ukuba) zikhethwe ngokusekwe kukuziphatha kwam kokuthenga.
Umsebenzi olungileyo… phantse. Kuyinyani, balikhumbule igama lam. Kodwa, abandiphathi ngokwahlukileyo njengesiphumo. Ndiyibhalile iGoDaddy ngesi sikhalazo: xa ndibona, undiphatha ngokungathi andingomthengi. Ukuhamba konke kungumxholo wentengiso yangaphambi kokuthengisa. Ukuba ndifuna ukufikelela kwimimandla yam, iisayithi zam ezibanjelweyo, iakhawunti yam, njl.njl., Qiqa endimele ndikwenze: cofa indawo ethi "not you" kwaye ungene ngokutsha. Yeyiphi, ngendlela, engabonisi ifom entsha yokungena kwiphepha elinye. Hayi, sisixhumanisi esiphilayo kwiphepha elitsha ekufuneka lilayishwe.
Ngoku, ndiyasiqonda isidingo sokukhusela ulwazi olufuna ukungena. Kwaye, ewe, ndonwabile ukuba bayayenza. Nangona kunjalo, LinkedIn ukwazile ukufumana indlela entle yokukhumbula wena-ngempela ndikukhumbula – ukanti ukhusela oko kufuneka kukhuselwe emva kokungena.
Ukufika kwam ku-LinkedIn.com, ndiyayibona yonke into endilindele ukuyibona ndicinga ukuba ndingumsebenzisi obhalisiweyo kwaye bayandikhumbula. Ndiyakwazi ukuhamba ngaphandle kokuphazamiseka. Ayisosikhumbuzo senkohliso. Nangona kunjalo, ukuba ndizama ukuthumela, ukuhlaziya, okanye ukutshintsha nayiphi na idatha, bayandiphazamisa ngencoko yokungena ngokukhawuleza, ethi ikhumbule igama lam lomsebenzisi. Ke, inye kuphela intsimi ekhawulezayo yokugcwalisa, hit hit, kwaye ndiyaqhubeka ngaphandle komthungo.
Bendisebenza ukuphucula ukuba ndikhumbule abathengi bam, nam. Kwifayile yam isayithi, kudala sinikela ukukhumbula abathengi ixesha elide. Jonga ibhokisi kwaye siya kukukhumbula iziqinisekiso zakho zokungena. Kodwa, kutshanje ndifunde iqhinga elitsha kumhlobo wam IMack Earnhardt onokufuna ukuyiqesha. Ukuba iseshoni yomntu iphelelwa lixesha, okanye ukuba bandwendwela ikhonkco elifuna ukungena kuqala, ngaphambi kokuba ubakhuphele ngaphandle kwiscreen sokungena, gcina iseshoni eyahlukileyo kunye nendawo abebesiya kuyo. Ke emva kokungena ngempumelelo, baphinde bahanjiswa kwakhona apho bafuna ukuya khona. (Enkosi, Mack)
Eyona ndlela yokwazi ukuseta indawo yakho ukuba ikhumbule iindwendwe kukuba undwendwele rhoqo ngokwakho. Sebenzisa indawo njengoko abathengi bakho beya kwenza, jonga ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo. Andikwazi ukucinga ukuba abasebenzi beGoDaddy basebenzise iwebhusayithi yabo ukulawula i-domain yabo-mhlawumbi isizathu sokuba inkqubo yabo ephazamisayo ingabonakali. I-LinkedIn, kwelinye icala, inokuba isebenza kakhulu ngesixhobo sayo. Ngaba uhamba ngeembadada zabathengi bakho? Khumbula ukuba kunjani ukuziva ulibele.
Sep 16, 2010 ngo-12:45 PM
Ndivume ngokupheleleyo, Nick! Ngaphandle kokuthanda uGoDaddy, onomnye weMigaqo yeNkonzo ekhululekileyo kwishishini.
Sep 16, 2010 ngo-4:33 PM
Ukuba ucinga ukuba i-TOS yabo ikhululekile, funda yam. Geesh, iyamangalisa ukuba nabani na uthenga kum. (Yhoo, yayisitsho)
Sep 16, 2010 ngo-6:04 PM
Ingxaki ngeyabo kukuba banokuthatha isizinda sakho ngaphandle kwamaphepha asemthethweni. Funda nodaddy.com ngamanye amabali amasikizi kumashishini alahlekelwe yigama lesizinda ngaphandle kwesizathu.